UKUHLELA: I-alamu enkulu yenhlekelele ye-nyukliya eduze! : UMartin Vrijland
BREAKING: I-alamu enkulu yezinhlekelele zenuzi emhlabeni jikelele!
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-11 March 2019	• 10 Amazwana
Umthelela omkhulu wezinhlekelele zenuzi ezizayo ezisendlini enkulu kunazo zonke eziseYurophu manje isizathu sokuphakamisa ngokushesha i-alamu enkulu! Ama-media ajwayelekile ahlala ethule ngalokhu, kodwa kunesisindo esinzima sonke. Uyazi yini izitshalo zamandla enyukliya eBorssele noma eThange (Belgium)? Uyazi yini umthelela omkhulu wokutshala amandla kagesi? Bese uqaphele!
Wonke umuntu ngaphezu kwe-40 ukhumbula inhlekelele yenukliya eChernobyl 26 April 1986 njengoba izolo. Inhlekelele yenukliya manje egijima yilapho isondela kakhulu ekhaya. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi uthola lo mlayezo ngokushesha ngangokunokwenzeka en ngangokunokwenzeka amasheya! Beka eceleni konke okwenzayo manje futhi uthathe isinyathelo manje! Kuyinto engathí sina! Kuwe kuwe ukuthumela i-imeyli, ifeksi, ukuphrinta, ukusabalalisa nokusabalalisa lokhu ngezindaba zomphakathi kuwo wonke umuntu owaziyo.
Sikhuluma ngengozi ehlasela ngqo umuntu! Inhlekelele yenukliya ye-mega isilinganiso! Isitshalo samandla enyukliya esikhulayo siveza impendulo ye-1: amafasitela nezivalo zivaliwe futhi ngokushesha zingene esiteji ukuze zifihlwe! Inhlekelele yenukliya esitshalweni eYurophu ikhiqiza imisebe yomsakazo echaphazela konke ukudla nokuphuza amanzi. Imishanguzo inamandla kakhulu emaminithini ambalwa okuqala ukuthi udinga ukuhlasela kwe-nyukliya yangempela ukuze usinde. Ukwethuka kokusongela kungazelelwe kunomthelela omkhulu, ngoba uvela kwesinye isibili kuya kwesilandelayo. Kuyinto isibhakabhaka esibhakabhakeni esicacile futhi ucingo kumsakazo kanye ne-TV kuhambisana ne-alamu enkulu emoyeni. Wonke umuntu usekwesaba futhi imiphumela ayinakwenzeka.
Nokho, le nhlekelele yenyukliya iza njengesela ebusuku. Le nhlekelele yenyukliya iyahamba ngobuqili. Amabhena alamu ayathuli futhi uqhubeka ulala ngokuthula. Uma uzwa ucingo oluphuthumayo oluvela esiteshini samandla enyukliya esikhiphayo namuhla, uzogijima ukufihla. Kodwa-ke, igesi enobuthi elingenasici futhi elingenakunambitheka; ubuthi obungahambi endlini yakho; awuboni ukuthi ubuthi futhi uqhubeka uphefumula ngokuthula. Kodwa lokhu kukuthinta inhliziyo yakho. Ngakho kungenye inhlekelele yenukliya.
Kancane kancane umzimba kanye namalungu ahlasela. Uvuka futhi ungaphazanyiswa ngakusasa ekuseni. Lo mbulali uthatha isikhathi sakhe. Uhamba kancane kancane empilweni yakho. Awuboni futhi ubheke nxazonke zakho. Akekho ozungezile oyoqaphela. Akekho othuthumela. Akekho obonakala sengathi uphelelwa yithemba. Wonke umuntu uzolile futhi i-alamu yomoya ithule. Ngisho umsakazo kanye ne-TV ayathuli. Bheka ukuphakela kwezindaba zakamuva; lutho kubonakala lungalungile.
I-alamu ibonakala ingenalutho, kodwa akunjalo! Inkinga yukuthi ukusabela kokushaqeka kwenhlekelele yenuzi kungakwenza ugijime. Awuboni inhlekelele ehambayo. Le nhlekelele idlulile kakhulu. Le nhlekelele isakazeka kusukela esizukulwaneni kuya esizukulwaneni. Le nhlekelele ngeke ihlukunyezwe ngomsakazo kanye ne-TV. Yilaba abahambisa igesi enobuthi! Imidiya, imithombo yezenhlalo kanye nokuphikisana okulawulwayo yizingqwembe zamachibi ukuthi ingubo yegesi yobuthi ihlanganisa izwe. Bahambisa ubuthi babakhiqizi begesi e-Brussels naseThe Hague. Bakugcina ebuthongweni bakho futhi bathi "amehlo avaliwe kanye nemifolo", "isimo sezulu sizoba mnandi namuhla."
Baze bakwenze ube yingxenye yenqubo yokukhiqiza. Ungakwazi ukufaka ivoti lakho bese ukhetha ukuphathwa okungcono kunomkhiqizi we-poison gas. Bese beqinisekisa ukuthi ubuthi obunqamula ukuqhuma kwendlu yakho bubumnandi nakakhulu. Ungase ube umphakeli kunethiwekhi yokusabalalisa yomkhiqizi wegesi bese uthola imali yakho emsebenzini ngezinhlelo zayo. Ku-TV uzobona izingxoxo mayelana nephunga elihle kakhulu nomphumela wezinambuzane we-ukunambitheka okumnandi. Ungumkhiqizi onika umuzwa wokuhlangana.
Saqala ukuthanda umkhiqizi wethu we-poison gas. Saqala ukukholelwa kulo. Asazi lutho olungcono, ngoba sazalelwa ezweni lapho umkhiqizi wegesi wobuthi ehlala khona. Umkhiqizi owayehlale ephethe. Sivame ukulethwa ngabamele abasha nabaqondisi. Kuye kwaba njalo iminyaka. I-Matthijs van Nieuwkerkjes idayisa igesi lobuthi emsakazweni, ku-TV nasephephandabeni. Ibhodi elisha lefektri elisha manje lizopompa igesi enobuthi ngokusebenzisa izinkumbi ngisho ne-tastier. I-poison yakamuva iyakuthanda ngisho iyanuka futhi ikunika ukudakwa ngokweqile.
Ngenxa yokuthi ifoni ifuna ukuqhubeka nokudayisa isidingo sokuba khona kwayo, iqinisekisa ukuthi abantu abakamelo okuhlala bayesaba. Yingakho imboni ibonisa njalo ukuthi izigebengu eziningi zibulala ezinye izikhali nokudlwengula okwengeziwe. Ngisho nama-tubes wokubuka kanye namadivayisi eselula awaphephile kulawa maqembu eziyingozi. Amaphephandaba, umsakazo kanye ne-TV kubonisa indlela abalindi befektri ye-poison egcina ngayo umhlaba kahle kakhulu ngakho abantu abasendlini bazimisele ukukhokhela konke lokhu kuphepha. Okwamanje, baphuza uketshezi oluphuzi olunegolide futhi babukele ukuzijabulisa ebhodini lokubuka noma baya ezakhiweni ezinkulu lapho abaculi befektri ye-poison basakaza amaswidi. Ifektri yegesi yobuthi iyinto enhle kubantu. Igcina inethiwekhi yomgwaqo futhi inikeza inethiwekhi yombhobho kuwo wonke amanzi okuphuza, amapayipi amachibi nezinye izakhiwo.
Ngemuva kweMpi Yezwe Yesibili, imboni yegesi yobuthi empeleni yayiyodwa yodwa ngemali encane yokwakha kabusha izwe. Kwabe sekuvunyelwe ukuthi sikhethe ukuthi yibaphi abaqondisi befektri yegesi enobuthi abavunyelwe ukuthi bakhe kabusha umhlaba. Singakhetha kusuka kubantu abahlukene besuka efayini ye-poison gas. Phakathi naleso sikhathi yizingane nabazala bomndeni noma izihlobo zabanikazi bamasheya zangaphambili abahlinzeka abaqondisi befektri nokuthi yizivakashi ezinhle kakhulu. Abanye basho kahle lokho engikucabangayo, isibonelo, futhi ngezinye izikhathi banzima kakhulu ebhodini elidala. Lowo muntu omuhle! Ngakho uma bangibiza ukuba ngiye emaphoyiseni, ngakhetha umuntu engiwuthandayo kakhulu. Lesi sikhathi ngiyazi: kuyoba yilabo abahlubukayo!
Ngizwile ukuthi umkhiqizi wegesi onobuthi uhlakaniphile kangangokuthi ngisho banomnyango lapho ogcina amehlo kubantu. Ubuhlungu obhiqizwa yifektri bugcina abantu esimweni esivumelana ngaso sonke isikhathi, kodwa-ke bangakwazi ukwenza umsebenzi wabo njengokujwayelekile. Manje-ke kukhona abantu abadinga umthamo omkhulu wegesi yobuthi. Bese ngokungazelelwe bavumelani nabaphathi abakhethiwe befektri. Kubonakala sengathi umkhiqizi wegesi we-poison uye waqasha omakhelwane bakho ukuba bagcine izinto. Baphinde bahlele imibhikisho ngokwabo ukuze abantu bakwazi ukuphuza isobho kancane.
Kodwa-ke, abantu abaningi manje bancike ezingxenyeni ezingqalasizinda kanye nezinhlelo zefektri ye-poison gas; abantu abaningi banomsebenzi ehlobene of okuhlinzekwe ngu i-factory gas gas, ukuthi empeleni akunakwenzeka ukucabanga ngemboni yegesi yobuthi kusuka ekuphileni kwansuku zonke. Yingakho abantu beqhubeka bevotela ibhodi elisha lefektri futhi ubuthi empeleni luba mnandi ngaphezu kweminyaka. Ungacishe uqhathanise nohlobo lwe-ecstasy.
Kubantu abadlulile kungenzeka ukuthi baqhuma nge-pitchforks yabo futhi bavala itende lonke. Umshini usuvele wakha ibutho elikhulu labaqaphi. Ifektri iyesaba kakhulu lokho kusongela ukuthi ihamba phambili kuyo yonke into nayo yonke indawo yonke indawo. Benza lokhu ngoba bathi kunezinhlobo ezimnyama ezifuna ukuhlaselwa lapha nalapha, kodwa ekugcineni ukuvikelwa kwefektri kanye nenethiwekhi yesikhumbi kuyanda. Babezokwenzenjani uma abantu abasendlini beyeka ukubamba iqhaza? Kungani abantu abasendlini beqala ukukholelwa futhi bethemba ifoni ye-poison gas? Ingabe yilokho ngoba baye balungisa iphunga futhi banambitha ngendlela yokuthi baqala ukuyithanda?
Abantu basebenzisa ukukhiqiza ngokwengeziwe. Manje zithembele ngokuphelele. Baye bajwayele ukubulala izinzwa futhi empeleni akekho umuntu ovela kulesi sizukulwane owaziyo ukuthi kwakunjani ukuhlala ngaphandle kokuhlinzekwa kwe-poison.
Kodwa yebo, nami ngiyaqaphela ukungavoteli. Ngabe sengenza okuthile. Futhi angisenayo iforkfork. Eqinisweni, mina nomakhelwane bami sesaba kakhulu, abantu abancike kakhulu, kodwa ngenhlanhla sisaba nethubhu yethu yokubuka. Noma ingabe kufanele ngibuze umakhelwane wami uma engathandi ngempela ukuqeda leyo poison? Mhlawumbe uzoqeda nokuvota kwakhe? Awu, kuyiqiniso: usebenzela abalindi befektri. Noma ngingabe ngimbuza? Kubi kakhulu i-gesi ye-poison!
Funda izihloko lapha kwiwebhusayithi ezikuxwayisa ngokuningiliziwe mayelana negesi elisondelene ne-poison ehamba ngokukhululeka mayelana nawe. Yiya ekhasini lasekhaya bese upheqa ngezihloko. Kufanele uvele phezulu futhi uthathe isinyathelo ngokushesha uma uqaphela ukuthi kwenzekani! Uzoxwayisa ngokushesha umndeni wakho nabangani bakho! Kodwa awukwenzi lutho. Uthanda ukulinda kuze kube yilapho isimo samaphoyisa wedijithali sizinzile ngokwakho futhi wena nabantwana bakho ngeke nisakwazi ukuya khona noma kuphi. Noma ucabanga ukuthi kuzoba kuhle, uma nje wena nabantwana bakho beqhubeka nokusebenzela umkhiqizi noma amasevisi ahlobene. Usiza ukwakha ijele lakho kanye nobuthi ngokuhlala ungahambi. Isikhathi saso i-revolution!
Kungani i-skynet yase-Elon Musk, i-nanotech kanye nemigomo izobona i-Ascension
11 March 2019 ku-10: 14
Sizokwephula kanjani lesi sunguli esinonya sokuthembela?
Ngaphandle kwamanga, sifunda kusukela ebuntwaneni ukuba singeneli ngokwanele ohlelweni lwezemfundo, kodwa sithathe indawo ohlelweni njengomuntu omdala. Le nqubo igxilisa futhi ixhaphaze abantu. Imfundo ephoqelekile, isibopho sokugoma, isibopho sentela ... ubophekile ukuba ugcine umthetho, kanti labo abasemandleni kanye neziphathimandla ezihambisanayo bayayinaki imithetho nemigomo ehlelwe yibo.
Uma ubona ukuthi zingaki izinhlamvu ezisongelayo engizithole ekuphileni kwami ​​kubameli, ngeke ukholwe ukuthi lokhu kwakunguhulumeni wesisekelo sombuso wentando yeningi. Yebo yebo ... ukukhononda kuqinisiwe kuvunyelwe, kodwa ukuthola ilungelo kungenye indaba.
Ngakho: Asikwazi ukukhalaza futhi kufanele senze okuhle kakhulu!
Uma lokho kungaphumeleli, usuke uyisiphukuphuku nje, ngoba kuphela izingqondo ezihlakaniphile, zokudala nokusebenza kanzima ziphumelele ... kulungile?
11 March 2019 ku-10: 22
Uphinde futhi omunye umuntu ongeke asebenze futhi ugesi wakhe onobuthi. Ake sibone ukuthi singakwazi yini ukubamba abantu abanjalo ngemininingwane yethu enkulu kanye nezinhlelo ze-AI .. futhi mhlawumbe uye ku-gulag
11 March 2019 ku-10: 49
Ngokweqile, ngisenayo imifino eyanele, izihlahla kanye nezinsimbi ... eduze kwamachungechunge amabili kanye nawo wonke amanye amathuluzi emahlathi, kufaka phakathi (ezibukhali) izikhonkwane. Yebo, nami ngiyakwazi ukusingatha lokho! Mhlawumbe ewusizo lapho sihlangana e-Goelag, ngoba lapho singakwazi ukuhlala lapho ngenomfudumalo, uma singayithathi.
11 March 2019 ku-11: 52
Okokuqala, kufanele ngitshele ukuthi awubonakali ukwazi okuningi ngakho. Kukhona umehluko emini nasebusuku ngokwakha nokwakhiwa. Yingakho kuzodingeka kube yinto emangalisa kakhulu uma isitshalo se nyukliya siqhuma. Izinhlelo zokupholisa zihlukile kakhulu kanye nokuphepha. Ukuqubuka ku-reactor akuthinti ukusebenza nhlobo. Ngandlela-thile, uma kungifanele kahle, amaDashi angabakhiqizi bemikhumbi ye-reactor futhi sazi kusukela ekuqaleni ukuthi lezi ziphazamiso zazikulo (ukukhiqizwa kwekhwalithi empofu) futhi zithunyelwa.
11 March 2019 ku-11: 55
Khona-ke kumelwe ngithi cishe awuzange ufunde yonke into futhi awuqapheli ukuthi ngisebenzisa isichazamazwi ukwenza into ehluke ngokuphelele.
11 March 2019 ku-11: 59
Isiqubulo (kusuka kwisi-Greek metaphora: ukudluliselwa; isichazamagama: ukudluliselwa noma ukufanekisa; ukuphikisa: ngokoqobo) uhlobo lwezithombe, lapho kukhona ukuqhathaniswa okungacacile (okungabonakali).
11 March 2019 ku-12: 49
Belgium hahahahaha! inkinga / isenzo / isisombululo 🙂
11 March 2019 ku-14: 58
Isihloko esikhulu usuzinikele ngokucacile isikhathi futhi unakekele kuso. Njengoba ngikhathazekile, i-asap ishintsho lombuso, i-republic ene-demokrasi yangempela, amalungelo esintu wangempela. Kodwa yebo, njengoba ngibhala ngaphambili, abantu abavamile bafuna ukuba yizigqila kubantu abasolwa ngokujwayelekile, abangaphandle. Abantu abavamile baze bavikele ngisho nabasolwa ngokujwayelekile ngezinto zabo ezenziwe.
I-Netherlands zombiland, umhlaba wezidakamizwa, i-porn, i-porn porn, izwe elibhekene nezimali, elinye lamazwe asolwa ngokubaluleka kakhulu, izwe elikweleta elibamba amazwe anesibambiso e-stranglehold futhi alivumeli ukuba libe mahhala. Lokhu kuyashintsha kuphela uma abasolwa abaye bazinikezela izikhundla zabo eziyinhloko. Lokho ngeke kwenzeke ngokuzithandela. Ukhetho alusizi ngokuphambene nalokho.
11 March 2019 ku-22: 32
Hahaha, kucatshangwa kahle futhi kuchazwe kahle!
I-nice bait "inhlekelele yenukliya", ukukuvuselela ngendlela ehlukile.
12 March 2019 ku-06: 10
Njengoba nje amaphilisi e-iodine agcwalisa ingubo yegciwane, kumelwe siqinisekise ukuthi imiphefumulo yethu igcwele iqiniso ukuze amafu anobuthi angenalo ithonya.
Ungathola leli qiniso ngokuqoqa ulwazi ngaphandle kwendawo yakho yokududuza futhi wenze ucwaningo ngaphakathi kwakho.
Ngale ndlela ufunda ukuhlehlisa kabusha futhi ekugcineni uvikeleke emotweni ovela ngaphandle.
« Kufanele ufunde lokhu ngokuthula kukhona isifundo sangempela empilweni
Ucingo oluphuthumayo! »
Ukuvakashelwa okuphelele: 15.900.510